Ampianaro ny ankizy - Bezzia | Bezzia
Ampianaro ny ankizy
Ampianaro ny ankizy Izy io dia lafiny iray tena lehibe amin'ny fiainan'ny ray aman-dreny, satria sarotra indraindray ny manamboatra azy tsara. Izany no antony anomezanay hevitra avy any Bezzia anao hampianarana ny zanakao ary hiatrika olana toy ny tsy fitandremana be loatra izahay, ny fampiasana Internet amin'ny zaridainan'ny ankizy na ny fiainam-pianakaviana.
Toy izany koa, hohamafisinay ny fisian'ny fitsipika amin'ny fanabeazana fa koa ny soatoavina hafa toy ny faharetana, fanajana na fiaraha-miory, satria ny fanabeazana dia ampahany amin'ny roa ary afaka manao zavatra hafa foana isika mba hampandeha tsara ny raharaha.
"Ny tanjon'ny fanabeazana dia ny hahatonga ny ankizy haniry hanao izay tokony hataony", hoy i Howard Gardner. Hosedrainay izany.
ny Maria Jose Roldan hace Andro 6 .
Manaiky ny ray aman-dreny rehetra fa tsy mora ny mitaiza sy manabe zaza ...
ny Maria Jose Roldan hace Herinandro 2 .
Ny fiankinan-doha dia tsy olana mitranga amin'ny olon-dehibe irery, satria mety misy koa ...
ny Maria Jose Roldan hace 1 volana .
Ny fiaraha-miory dia iray amin'ireo soatoavina lehibe indrindra amin'ny zanak'olombelona. Fahaiza-manao izay ...
Ny maha-zava-dehibe ny fahasalamana ara-pihetseham-po amin'ny ankizy
ny Maria Jose Roldan hace 3 volana .
Vitsy ny ray aman-dreny mahalala marina ny atao hoe faharanitan-tsaina. Mandalo tanteraka io lafiny io ...
Inona no vokatry ny famelezana zaza
Na dia tsy nasiana totohondry aza ny fikapohana zaza, ny marina dia ny sazy ara-batana dia ...
Ahoana no mety hisy fiantraikany amin'ny fihetsem-po eo amin'ny zanaka ny tsy fahasalaman'ny ray aman-dreny
Ny ankizy dia tsy maintsy mitombo amin'ny fahasambarana tanteraka ary manalavitra ireo toe-javatra izay tsy miteraka fahasalamana ...
Mampalahelo fa ampahany amin'ny fiainana ny fanaintainana sy ny fijaliana ary ilaina ny fahalalana ny fiatrehana izany ...
Mahalana ny mahita ray aman-dreny manaiky fa poizina ho an'ny zanany izy io ary ny fitaizan-dreny omena ...
ny Maria Jose Roldan hace 7 volana .
Tsy misy ray aman-dreny tia miaiky fa simba ny zanany ary tsy mahazo fanabeazana sahaza. Tsy misy…
Raha ny fitaizan-janaka dia zava-dehibe toy ny fahatsapanao manokana ny teny. Ray aman-dreny maro ...
Ny soritr'aretin'ny zaza be fanomezana
ny Maria Jose Roldan hace 10 volana .
Samy ankizy daholo isika ary misy zavatra vitsivitsy mahaliana kokoa amin'ity fiainana ity noho ny manoratra taratasy ho an'ny ...
Oedipus sy Electra sarotra, mahasarika ny ankizy amin'ny ray aman-dreniny